THE EXPERIENCE OF ZIMBABWE WITH THE GLOBAL FUND’S NEW FUNDING MODEL | SAFAIDS
Zimbabwe,Ministry of Health & Child Welfare,2013
The implementation of the New Funding Model (NFM) and the timely finalization of the HIV grant in Zimbabwe were a resounding success. In less than a month,Zimbabwe mobilized an impressively consultative country dialogue, submitted a high quality concept note, engaged effectively with the Technical Review Panel (TRP) in incorporating its feedback and, in record time, finalized the grant application that was approved by the TRP.This accomplishment is a tribute to the leadership and coordination of the Ministry of Health, the National AIDS Council and the Country Coordinating Mechanism; the effective support provided by the Global Fund Secretariat and key technical partners;and the commitment and hard work of the many people who were involved.The experience of Zimbabwe as an early applicant in the transition phase of the Global Fund NFM validates the direction and aspirations of this new approach and highlights a number of its strengths. Important innovations that were welcomed in Zimbabwe included the improved predictability of financing, closer engagement by the Global Fund Secretariat in the funding application process, opportunities for increased stakeholder participation in national dialogue, a constructive process of preliminary engagement with the TRP, and the opportunity for alignment with national processes and strategic planning.
HIV funding in Zimbabwe
National strategic plan.